Huawei Y8s သည်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး Google ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည် Androidsis
Huawei အားလုံးသောအနိမ့်ဖုန်းဖုန်းနှစ်မျိုးကိုကြေညာပြီးတဲ့နောက် "Y" မိသားစုရဲ့အစိတ်အပိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ် Huawei Y5P နှင့် Huawei Y6P. ကုမ္ပဏီက Huawei Y8s ကိုကြေငြာလိုက်သည်Terminal နှင့်ဆင်တူသည့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံး Huawei Y9 2019.
ဒီဖုန်းရဲ့အသစ်အဆန်းတစ်ခုကတော့အဲဒါပါ ဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ရောက်ရှိသည်, အခြားထုတ်ကုန်များလွှတ်တင်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူရောက်လာပြီးနောက်ရွေးချယ်သူအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပိုဆိုးတာကတော့ Android အတွက်အစောပိုင်းဗားရှင်းနဲ့လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ update လုပ်မယ်လို့ကတိပေးထားတယ်။
1 Huawei Y8s နှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်အားလုံး
Huawei Y8s နှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်အားလုံး
El Huawei Y8s အသစ်သည် ၆.၅ လက်မအရွယ်ကြီးမားသည့်မော်ဒယ်သစ်ဖြစ်သည်, ဤကိစ္စတွင်အတွက် resolution ကို Full HD +, မျက်နှာပြင်ဖုန်း၏ကြီးမားသောဘောင်သိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်နှစ်ဆထစ်ရှိပါတယ်။ ဒီပုံစံမှာရှေ့မျက်နှာမှာနှစ်ဆအာရုံခံကိရိယာပါရှိပြီးအဓိကတစ်ခုကတော့ 8 megapixels နဲ့နောက်2megapixel help sensor တို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။
၎င်းသည်မျှမျှတတကျိုးနပ်သော Processor ကိုအသုံးပြုသည် 710 8-core အမြန်နှုန်းသည် ၂.၂ GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် ၄ င်း၏ Core များ၏လေးခုနှင့်အခြားလေးခုသည် ၁.၇ GHz ဖြစ်သည်။ GPU သည် ARM Mali-G51 MP4 ဖြစ်သည်ဂရပ်ဖစ်များကို4GB RAM နှင့် 64 GB သိုလှောင်မှု module တို့ကပံ့ပိုးပေးထားပြီး၊ MicroSD အမျိုးအစား slot မှတစ်ဆင့် 512 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။
El Huawei Y8s စီးနင်းလိုက်ပါ ဒေါင်လိုက်နှစ်ဆကင်မရာ module,fအဓိကအားအာရုံခံကိရိယာတွင် 48 megapixelsf/ 1.8 နှင့်2megapixels ၏ဒုတိယတစ်ခုသည် portrait mode ဖြင့်ဖြစ်သည်။ Fingerprint Reader သည် ၄ ​​င်း၏ကျောဘက်တွင် ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီအားသွင်းအားသွင်း ၁၀ ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး EMUI 4.000 ပါ ၀ င်သော Android 10 Pie Software နှင့် Google ၀ န်ဆောင်မှုများထည့်သွင်းထားသည်။
မျက်နှာပြင် Full HD + resolution ပါသော ၆.၃ လက်မ IPS LCD
GPU ကို မာလီ-G51 MP4
ပြည်တွင်းသိုလှောင်နေရာ 64 GB ကို microSD slot ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းကို 512 GB အထိချဲ့ထွင်နိုင်သည်
ချမ်ဘာ 48 MPf/ 1.8 အဓိကအာရုံခံကိရိယာ - ၂ MP ပုံတူအာရုံခံကိရိယာ - မျက်နှာစာ 8 အမတ်,f/ 2.0 +2အမတ်,f/ 2.4
ဘက်ထရီ 4.000W ဝန်နှင့်အတူ 10 mAh
OS EMUI9ဖြင့် Android 9.1 Pie
ချိတ်ဆက်မှု 4G - Wi-Fi4- Bluetooth 4.2 - 3.5mm Jack - MicroUSB ဆိပ်ကမ်း
El Huawei Y8s ၎င်းကိုအနက်နှင့်အစိမ်းရောင်များရှိ Huawei Jordan စာမျက်နှာတွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်စျေးနှုန်းနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းစီးရီးအသစ်၏အသင်း ၀ င်မှုကိုမထောက်ပံ့နိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei Y8s သည်ဂူးဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်